NextMapping | ढाँचाहरूको लाभ उठाउँदै भविष्यको भविष्यवाणी गर्नुहोस्
त्यहाँ कुनै क्रिस्टल बल छैन तर त्यहाँ एउटा गोप्य रहस्य छ जुन आविष्कारकहरूलाई थाहा छ - तपाई भविष्यको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुनेछ पैटर्नको लाभ उठाउँदै।
थियो अब्राहम लिंकन जसले भने, "भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका यसलाई सिर्जना गर्नु हो"। मा NextMapping हामी तपाईंलाई ढाँचाको लाभ उठाउँदै भविष्यको भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्दछौं।
मेरो किताबमा, "नेक्स्टमैपिंग - अपेक्षित गर्नुहोस्, नेभिगेट गर्नुहोस् र कामको भविष्य सिर्जना गर्नुहोस्" अध्याय दुईमा PREDICT मोडललाई भविष्यको आशा र नेभिगेशन गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ।
PREDICT मोडेलको लागि खडा छ:
जब तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विकास देख्नुहुन्छ वा तपाईंको व्यावसायिक जीवन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी ढाँचाले तपाईं अहिले बाँचिरहेको जीवनमा प्रभाव पारेको छ।
ढाँचा मान्यता को महत्व बहु-स्तरित छ - तपाईं आफ्नो भविष्य योजनाको लागि ढाँचा मान्यता बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं अवस्थित उत्पादनहरू वा सेवाहरूको आविष्कारको लागि ढाँचा मान्यता बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ रणनीतिक योजना बनाउनका लागि ढाँचा मान्यता बढाउन सक्नुहुन्छ।
रोजगारहरू वा कस्तूरी वा ओप्राह जस्ता इनोभेटरहरू ढाँचाको लाभ द्वारा सांस्कृतिक घटना सिर्जना गर्न सक्षम छन्। एप्पलले हामीलाई चाहिएको कुरा सिर्जना गर्न अगाडि अगाडि बढ्दछ जुन हामीलाई थाहा छ हामी दुवै प्राविधिक आविष्कारको ढाँचामा आधारित र योजना बनाएर जनताको टेक्नोलोजीको प्रवृत्तिमा योजना बनाएर।
मस्कले टेस्लाको निर्माणमा नेतृत्व लिनको लागि भविष्यको उर्जाको ढाँचा र वातावरणीय चिन्ताको विषय देख्यो। ओप्रा, अवश्य पनि उनको टक शो थियो, त्यसपछि उनको उत्पादन कम्पनी र अब एप्पल र प्रिन्स ह्यारीसँग उनको सौदा मानसिक स्वास्थ्यमा सामग्री सिर्जना गर्न। उनी सँधै मानिसहरूसँग मिल्दोजुल्छिन् र उनले भविष्यको सृजना गरिन् जुन उनी मानव व्यवहारको नमूनाको आधारमा कल्पना गर्छिन्।
मेरो तपाईं ट्यूब च्यानल मैले प्याटर्न मान्यतामा यो भिडियो साझा गर्छु - रमाईलो गर्नुहोस्!
केहि प्रश्नहरू ढाँचाको लाभ द्वारा भविष्यवाणी गर्न विचार गर्न:
मेरो आफ्नै जीवनमा के प्रतिमानहरू छन् जसले मलाई अहिलेको जीवनमा पुर्‍यायो?
मेरो शिक्षामा कुन-कुन बुँदाले मेरो भविष्य सिर्जना गर्दछ?
केहि ब्यवहारहरू र प्रवृत्तिहरू मानव ब्यबहारहरूमा भइरहेका छन् जुन हामीले हाम्रा उत्पादनहरू र सेवाहरू आविष्कार गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं?
हामी 2nd संस्करणको सुरुवात गर्दैछौं "नेक्स्टमैपिंग - अपेक्षित गर्नुहोस्, नेभिगेट गर्नुहोस् र कामको भविष्य सिर्जना गर्नुहोस्" 2020 को प्रारम्भमा साथी कार्यपुस्तिका साथ। कार्यपुस्तकले भविष्यका प्रश्नहरूको लागि लाभ उठाउनको लागि थप प्रश्न र प्रक्रिया प्रदान गर्दछ।